ओलीलाई २ प्रश्न : वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विधि के ? स्थायी कमिटी कहिले ?
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक शनिवार अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी तय भएको छ ।
बैठकको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवै पक्षका नेताहरू छुट्टाछुट्टै भेटघाटमा व्यस्त देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा ओली पक्षका स्थायी समिति सदस्यहरूको आवतजावत तीव्र छ भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष प्रचण्डपक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरू पनि घनिभूत छलफलमै व्यस्त देखिन्छन् । सचिवालय बैठकमा दुवै पक्षले एकअर्काको ‘फेस’ कसरी गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन व्यस्त रहेका छन् ।
गत बुधवार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राखेको प्रस्तावको आधार सचिवालय बैठकमा खोज्न सुझाएका छन् ।
शुक्रवार वरिष्ठ नेता नेपालनिवास कोटेश्वरमा नेपाल समूहका ११ स्थायी कमिटी सदस्यहरूले अध्यक्ष प्रचण्डसँग संयुक्त भेटघाट गरे । भेटघाटमा नेपाल समेत उपस्थित थिए । भेटघाटमा नेता नेपालले तेस्रो अध्यक्ष बन्न आएको प्रस्ताव आफूलाई मान्य नभएको बताएका थिए ।
ओलीको ‘बेमौसमी’ प्रस्तावमा सहमत हुनुभन्दा पनि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर समस्याको हल गर्नु नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता रहेको निष्कर्ष छलफलमा निस्किएको सहभागी भीम रावलले बताए ।
‘उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विधि र प्रक्रिया के हो भनेर स्पष्ट हुन हामीले दुवै नेतालाई सुझाएका छौं,’ रावलले भने, ‘उहाँ (गौतम) लाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पार्टीको निर्णय आफैंले कार्यान्वयन नगर्ने, अनि प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दै हिँड्ने ? यो अल्मल्याउने जस्तै देखिन्छ ।’ नेताहरूलाई अविलम्ब स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्न सल्लाह दिएको उनले बताए ।
यता प्रधानमन्त्री ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले उनलाई कुनै पनि हालतमा नझुक्न सल्लाह दिइरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो निरन्तर सम्पर्क भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । हामीले उहाँ (ओलीलाई) कुनै पनि हालतमा नझुक्न सल्लाह दिइरहेका छौं,’ ओली समूहका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरलाई भने ।
बुधवारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो भने आफूले संसदमै सबै कुरा फेस गर्ने बताइसकेका छन् ।
ओलीको अडानमा दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ । कुनै पनि हालतमा राजीनामा नगर्ने अडान लिएका ओली आफैंले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । ओलीनिकट मानिने नेता कर्ण थापाले एक सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै ओलीको प्रस्ताव रणनीतिक भएको र राजीनामा दिने कुनै सम्भावना नरहेको प्रस्ट पारेका छन् ।